दशैंमा देश छाडेर जानेहरु...! - Janabato
दशैंमा देश छाडेर जानेहरु...!
‘मेरो छोराले दसैँको मुखमा मैजसरी विदेशिनु नपरोस्’
२०७८ असोज २१ गते बिहिबार ०७:१७ मा प्रकाशित
११५ जनाले हेरिएको
बुटवल । महोत्तरी रामगोपालपुरका २० वर्षीय सञ्जय दासलाई दसैँतिहारअघि कतार जान मनै थिएन । तर, भिसा लागिहाल्यो । कम्पनीले टिकट काटेर तुरुन्तै आइहाल्न भन्यो । १७ असोज आइतबार साँझ ६ बजे उनी हतारिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगे । यो समाचार शिलापत्र डटकममा नवराज कुँवर र कौशल काफ्लेले लेखेका छन् ।
उनीजस्तै विदेश जान लागेका अरू थुप्रैका घाँटीमा खादा, माला अनि निधारमा रातो टीका देखिन्थ्यो । उनीहरूलाई छोड्न आफन्तहरू पनि सँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा आएका थिए ।
तर, सञ्जयको निधारमा कुनै टीका थिएन । घाँटीमा खादा वा माला पनि थिएन । उनलाई बिदाइ गर्नचाहिँ गाउँका दाइ सन्तोष आएका थिए । पीसीआर रिपोर्टमा छाप लगाउन लाइन बसेका सञ्जयले भने, ‘हामी दसैँभन्दा पनि तिहारमा खुब रमाइलो गर्थ्यौं । परिवारका सबै एक ठाउँ भइन्थ्यो । साथीभाइहरूसँग फिल्म हेर्न गइन्थ्यो ।’ सञ्जयले अबका केही तिहार विगतको सम्झनामै गुजार्नेछन् ।
यसरी चाडबाडको मुखैमा विदेशिनु उनको रहर पक्कै होइन । दाइ, दुई बहिनी, आमा र बुबा गरी ६ जनाको परिवार छ उनको । बुबाआमा दुवै दमका रोगी छन् । उनीहरूका हातगोडा कमजोर भएका छन् । आँखा धमिलिएका छन् । कान पनि कम सुन्छन् ।
दाजु काठमाडौंमा ज्यालादारी गर्छन् । तर, उनको कमाइले मात्र घर चलाउन मुस्किल छ । सञ्जय भन्छन्, ‘लाउन, खान त बनिबुतो गरेर भए पनि टारिएला । तर, दुई छोरीको बिहे गर्न सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता आमाबुबालाई छ । म पनि मेरा बहिनीहरूले दुःख पाएको देख्न सक्दिनँ । त्यसैले ११ को पढाइ छोडेँ अनि यी... कतार हिँडे ।’
सुरुकै प्रयासमा भिसा लाग्दा मिलेको खुसी उनले मनाउन पाएनन्, जब दसैँअघि नै देश छोड्नुपर्ने सन्देश म्यानपावर कम्पनीले पठायो । भन्छन्, ‘भिसा नलागेको भए म गाउँमै हुन्थेँ, दसैँतिहार मनाउन पाउँथेँ । तर, मसँग दुःख पनि हुन्थ्यो, मेरा आमाबुबाको थाप्लोमा ऋण बढेको बढ्यै हुन्थ्यो । बहिनीहरूको बिजोग हुन्थ्यो’, सञ्जय भन्छन् ।
कतारमा गर्नुपर्ने कामलाई लिएर भने उनी प्रस्ट छैनन् । पासपोर्टमा लेबर भिसा लागेको तर दोहा पुगेपछि जेसीबी अपरेटरको काम मिलाइदिने आश्वासन म्यानपावरले दिएको उनले सुनाए । ‘अब जे पर्छ, हेरौँला’, उनले दृढता व्यक्त गरे ।
पीसीआर रिपोर्टमा छाप हानेपछि उनी टिकट जाँचतिर लम्किए । पछिपछि सन्तोष पनि गए । त्यहाँ लाइन थियो । दाजुभाइले एक सेल्फी लिए, हात मिलाए अनि अंकमाल गरेर छुट्टिए ।
केही अघिसम्म हाँसीखुसी बोलिरहेका सञ्जय एकाएक भावुक बने । आँखाभरि आँसु पार्दै दाइ फर्केको हेरिरहे । ‘भाइ छिटो गर, कहाँ बीचमा उभेको ?’, टिकट जाँचमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई सुनेपछि हतारहतार सञ्जयले हातको मास्कले आँसु पुछे । फेरि त्यो मास्क मुखमा लगाए अनि लगेज तान्दै भित्र छिरे ।
गाउँलाई दसैँले छोपेको छ । कोदो फुल्दै छ । धान झुल्दै छ । पारिलो घाम र घरीघरी आउने चिसो सिरेटोले दसैँको माहौललाई झन् रमाइलो बनाइरहेको छ । पढ्ने, काम गर्ने सिलसिलामा विदेशिएका, शहर पसेका युवायुवती गाउँ फर्किन थालेका छन् । तर, पर्वत फलेवास थापाठाना–३ की पुनम क्षत्रीको मनमा पोहोरजस्तो उल्लास छैन । दसैँको छेकोमै भाइ सागरको भिसा झ¥यो । अघिल्लो साता उनका भाइ सागर कतार उडेका छन् । ’दसैँचाहिँ मनाएर जाने कुरा थियो । भिसा आइहाल्यो’, पुनमले सुनाइन्, ’भाइ नहुँदा हाम्रो घरमा दसैँ र तिहार नै खल्लो हुने भयो ।’ उनका अनुसार सागर नेपालमै सेना वा प्रहरीको जागिर खान चाहन्थे । ’तर, यसमा पनि सोर्सफोर्स चाहिन्छ । यता समय बर्बाद गर्नुभन्दा विदेश गइयो भने अलिअलि कमाइ हुन्छ भनेर हिँड्यो’, उनले भनिन्, ’चाडको बेला परिवारमा सन्नाटा छायो ।’
उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दसैँको मुखमा देश छोड्नेहरूको लस्कर सानोतिनो छैन ।
असोज लागेयता कामका लागि विदेशिनेको संख्या चार हजार नाघिसकेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसरी विदेशिनेमा पुरुष ३ हजारभन्दा बढी छन् भने झण्डै एक हजार महिला छन् । १६ सय बढी नेपाली कतार गएका छन् । दुबई, साउदी, ओमान, बहराइन, जापान, साइप्रस, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, माल्दिभ्स, क्रोएसियालगायतका देश जाने नेपालीको घुइँचो विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण यस्तो संख्या कम थियो । त्यसअघिका वर्षहरूमा त दैनिक हजारभन्दा बढी युवा दसैँको मुखमा विदेशिने गरेका वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेका अनुसार हाम्रो अस्थायी बसाइँसराइँको इतिहास हेर्दा पनि कुनै नौजवान कामका लागि देशभित्रै र बाहिर जाने तर दसैँको अवसरमा केही लुगाफाटो, खानेकुरा अनि पैसा बोकेर आफ्नै घर फर्किने गरेको देखिन्छ । दसैँ र तिहार बहुसंख्यक नेपालीहरूको महान् चाड हो । आफन्तहरू जमघट हुनु, ठूलाले सानालाई टीका लगाएर आशीर्वाद दिनु, मीठोमसिनो खाँदै रमाइलो गर्नु यो पर्वको खास विशेषता हो । यसपछि आउने तिहार गाउँटोलमा देउसीभैलो खेल्ने, नाचगान गर्ने, दाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट सप्रेम टीका लगाउने अर्को उल्लासको पर्व हो । तर, यिनै महत्त्वपूर्ण पर्वको मुखैमा दैनिक सयौँ युवा कामको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् ।
पेसा, व्यवसाय गर्दै काठमाडौंसहितका विभिन्न शहरमा बस्नेहरू दसैँका लागि गाउँ फर्किन थालेका छन् । विदेशमा हुनेहरू पनि छुट्टी मिलाएर दसैँ मनाउन काठमाडौं ओर्लिइरहेका छन् । तर, चाडबाडको मुखमा भर्खरै विवाह गरेका युवकदेखि मसिना केटाकेटीका बुबाआमासम्म विदेशिइरहेको टिठलाग्दो दृश्य विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ । विदेशिनेको लर्काेमाझ विमानस्थलमा कतिपयका आफन्तबीच रुवाबासी नै हुने गरेको छ । सीमातिर दसैँ भुलेर भारत छिर्नेहरू पनि थुप्रै हुन्छन् ।
समाजशास्त्री घिमिरे यसलाई दुई तरिकाले अर्थ्याउँछन् । पहिलो, यसले नेपाली समाजमा आएको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको संकेत गर्छ । नागरिकको अवस्था, चेतना तथा बुझाइमा आएको परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो एउटा सामाजिक परिवर्तनको द्योतक हो । ’अब समाजमा रहेका सम्बन्धहरूमा परिवर्तन आएको छ । यस्तो परिवर्तनबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, आशीर्वादले आफ्नो समृद्धि सम्भव छ वा भाग्य निर्माण गर्छ भन्नेमा युवापुस्ता विश्वस्त छैन । बरू केही अवसर पाइहाल्यो भने त्यो अवसर छोप्न चाहन्छ’, उनी भन्छन् ।
दोस्रो, यसले देशमा रोजगारीका अवसरहरू अत्यन्तै कम भएको र सरकारले ल्याएका रोजगारीका कार्यक्रमहरूप्रति युवाको विकर्षण बुझाउँछ । देशभित्र रहेर आफ्नो आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्ने ठानेर ठूलो संख्यामा युवाहरू कामको खोजीमा देश छोडिरहेका छन् । चाडबाड मात्र नभएर अरू बेला पनि, हरेक दिन सयौँको संख्यामा युवाहरू बाहिरिनुले आन्तरिक रोजगारीको कुरुप चित्रलाई उजागर गरेको समाजशास्त्री घिमिरेको तर्क छ । देशमा कलकारखाना उद्योग, धन्दा खुल्नुको साटो बन्द भएका छन् । आर्थिक उपार्जनका लागि केही अवसर नदेखेपछि युवाहरू आफ्ना मनका रहर र चाहनालाई गाँठो पारेर विदेशिरहेका छन् ।
हुन त, वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक अवसर, गरिबी निवारण, विप्रेषण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पु¥याएको छ । तर, यो नेपाली युवाको बाध्यता र कष्टपछि मिलेको उपलब्धि भएको रोजगारविज्ञहरू बताउँछन् ।
रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, ’दसैँ आउनुअघि बिरानो देश जाने रहर कसलाई हुन्छ होला र ? तर, अब बाध्यताका बीच पनि नेपालीहरू रमाउन थालेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।’
समाजशास्त्रीसमेत रहेका उनी दसैँ मान्ने तौरतरिकामा थुप्रै परिवर्तहरू देखा परेको बताउँछन् । ’पहिला भेटघाट गरेर दसैँ मान्नुपर्छ भन्ने थियो । अहिले प्रविधिको युगले सँगै नभएर पनि दसैँ मनाउने सुविधा दिएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि दसैँ मनाउन थालिएको छ । यद्यपि, यो बाध्यता नै हो, जुन राज्यको कमजोरीका कारण सिर्जित हो,’ उनी भन्छन् ।
शिलापत्रको सम्पादित रिपोर्ट
नेकपा कपिलवस्तुद्वारा तीन बुँदे कार्यान्वयनको लागि प्रदर्शन
सैनामैनामा वडा अध्यक्ष कार्की चढेको गाडी दुर्घटना
नेकपा अछामद्वारा सुदृढ जनसम्बन्ध तथा संगठन विस्तार अभियान उद्घाटन
रूपन्देहीमा निषेधाज्ञाको तयारी
बन्द भए रूपन्देहीका विभिन्न स्थानका हाटबजार